Ye-Mon's Personal Pages: Presumption of innocence
Labels: law, OpEd, public health
Let me tell you something about the same hospital and the same surgeon.
My Mom (70 yrs) was admitted for acute abdominal pain, dx as acute appendicitis. She was operated by the same surgeon.
I was informedaday after operation that she was in ICU.Why?
Post op care was lousy. Just to do Ryles tube/ suction need an order fr Surgeon. My Mom had AF/ d/t electrolyte imbalance. The worse part is the surgeon mis dx her as acute appendicitis. She had intestinal obstruction d/t adhesion of previous hysterectomy.
She was lucky to be alive. Second operation for adhesiotomy was free. There was no apology fr the surgeon.
I do not want to mention the names here, but Burmese private health care system is Evil. I do not think these people deserve your post title.
In this particular case of tragedy, the girl has fever for "Five" days. One of the very common symptom of Dengue is abdominal pain. If they did Full Blood Examination, the live of the girl might be saved.
Appendectomy=> no bleeding => no blood required=> quick money=> operated to impending DHF case=> and death of an innocent young girl!
I have decided not to write about this case as the issue is more thanatragic/ mishap. That is all about corrupt mind set infiltrated intoaonce noble profession in Burma.
မြန်မာမီဒီယာတွေ ဥပဒေရှေ့ကတင်ကြိုပြီး အဆုံးအဖြတ်ပေးနေတယ်လို့ တက္ကသိုလ်လှမွန်က ဆိုတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာထောက်ပြစရာနှစ်ချက်ရှိတယ်။ weekly 11 ရဲ့ အရေးအသားမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးတာမျိုးမရေးထားဘူး။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောသလဲဆိုတာကိုပဲ စုစည်းတင်ပြထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။
တခါဥပဒေတွေအားကိုးလို့မရတဲ့နေရာမှာ မီဒီယာက ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ မေးစရာရှိတယ်။ အမေရိကားက context ကို ဗမာပြည်မှာ ထပ်ကြည့်လို့ရမရ မေးဖို့လိုတယ်။ တရားရုံးပို့ခွင့်မရ၊ စီရင်ချက်မကျမချင်း သတင်းမပို့ရဆိုရင် နောက်လူနာတွေ ထပ်နစ်နာဖို့ရှိတယ်။ သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထုတ်ပြန်ဖို့၊ လူတွေကို အသိပေးဖို့ လစ်ဟင်းနေတဲ့အခါ weekly 11 က ရေးတဲ့သတင်းမျိုး လူတွေသိသင့်တယ်။ သူ့အရေးအသားက စည်းပေါင်ကျော်ပြီး လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုး မထွက်ပါ။ ဘာကောက်ချက်မှ မချထားဘဲ သူများတွေကိုပဲ quote လုပ်ထားတယ်။ ဒါကတပိုင်းပေါ့။
ဆေးခန်းတွေ ဆရာဝန်တွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ဝေဖန်ပြုပြင်ပေးမယ့် watchdog တွေ မရှိ၊ ဥပဒေက အားကိုးလို့မရတဲ့ နေရာမှာ တာဝန်သိသူတွေ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာက objective ဘယ်လောက်ဖြစ်သလဲဆိုတာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ when something important is going on, silence isacrime လို့ဆိုကြတယ်မဟုတ်လား။ objective မဖြစ်လို့ နှုတ်ဆိတ်နေရမယ်ဆို တာဝန်မဲ့ရာရောက်ပါတယ်။ weekly 11 ထဲက အရေးအသားမျိုးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ technical နဲ့ ethics ဘယ်ဟာရွေးမလဲလို့ တကသလမ က ကိုယ့်ကိုကိုယ်နဲ့ စာဖတ်သူတွေကို မေးနေသလို ဖြစ်နေသလားလို့။
>> Anonymous 1
I do not think that quality of care issue is confined to private sector alone. We should look at health system in the country asawhole.
>> Anonymous 2
From two stories, we just don't have enough information to jump into conclusion similar to yours.
weekly 11 ကရေးထားတာက snapshot မှာလို တဲ့တိုးအပြစ်တင်တာမရှိဘူး ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ သို့သော် သတင်း ခေါင်းစဉ်မှ စကာ သွယ်ဝိုက် အပြစ်တင်ထားတာကို တွေ့ရပါမယ်။
အမေရိကန် သတင်းကို ဥပမာ ပေးသော်လည်း မြန်မာပြည်တွင်းက သတင်းမှာပင် အောက်ပါအတိုင်း မျှမျှတတ ရေးထားသည်ကို နမူနာ ယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။ ဂရင်းရွိုင်ရယ် စက်ရုံမီးလောင်မှု ဖြစ်သည်။
"ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် International Beverages Trading Co., Ltd. (IBTC) ၏ လုပ်ငန်းခွဲဖြစ် သော ယင်းအရက်ချက်စက်ရုံကို လှည်းကူး ရဲစခန်းက ပုဒ်မ ၂၈၅/၃၀၄ (က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။"
ဥပဒေကို အားကိုးလို့ မရလို့ဆိုပြီး မိမိတစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ ဥပဒေကို ဖန်တီးဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အားကိုးလို့မရတဲ့ ဥပဒေကို အားကိုးလို့ ရလာအောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ ဆိုတာ ပိုပြီး သင့်လျော်မယ် ထင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောလိုတာက စာနယ်ဇင်းများ နှုတ်ဆိတ်နေရမယ်လို့ မဆိုလိုပါ။ အဖြစ်မှန်ကို ရုပ်လုံးပေါ်ရန်သာ ရေးသားသင့်ပြီး တရားသူကြီးတာဝန် မယူသင့်ကြောင်းကိုသာ ထောက်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သတင်းရေးနေရတဲ့ လူတယောက်အနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ ကုသတဲ့ဆရာဝန်အင်တာဗျူး ပါကိုပါရမယ်။ အဲဒီအချက်လိုသွားတယ်။ တကယ်လို့ သွားမေးတာမဖြေဘူးဆိုရင် မဖြေကြောင်း ထည့်ရေးရမယ်။
တရားဥပဒေရှုထောင့် နှင့် ဆေးပညာရှုထောင့် နှစ်မျိုးစလုံးကနေ
အစ်ကိုသုံးသပ်ထားသလို တရားဥပဒေရှုထောင့် အရကြည့်တဲ့အခါ
ခုလိုကိစ္စမျိုးကိုတော့ဆုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ ဆေးပညာရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် ၉၀% အပြစ်မရှိလောက်ဘူးလို့ သုံးသပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီဒေါက်တာအပြစ်မရှိဘူးလို့
ကျွန်တော်တို့သဘောထားလိုက်ကြမယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာက အဲဒီဒေါက်တာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ အစ်ကို့အနေနဲ့ နောင်မှာအလားတူကိစ္စမျိုးမဖြစ်အောင်အကြံပေးဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။
မတွေ့မိလို့ သေချာလေ့လာဆွေးနွေးထားတဲ့ အစ်ကို့ဆီမှာ
ခုလို comment ပေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာလေးအစ်ကိုသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။